Ma Ogtahay In Salim Khan Hada Ka Hor Rishi Kapoor Ugu Hanjabay In Mustaqbalkiisa Bollywood-ka Uu Bur Burin Doono Iyo Sababta Arintaan Ka Danbeysay | Filimside.net
Home » Bollywood News » Ma Ogtahay In Salim Khan Hada Ka Hor Rishi Kapoor Ugu Hanjabay In Mustaqbalkiisa Bollywood-ka Uu Bur Burin Doono Iyo Sababta Arintaan Ka Danbeysay
Naga Raali Ahaada Maanta Webka Farsamo Ayaa Laha Heeyay Hada Ka Dib Qof Walbo wuxuu Soo Booqan Karaa
Rishi Kapoor wuxuu ka mid yahay xidigaha ugu wanaagsan ee bollywood-ka soo maro halyeeygaan ayaa goor dhow qoray buuga ka hadlaayo nolashiisa oo lagu magacaabo ‘Khullam Khulla: Rishi ayaana banaanka soo dhigay waqyaabo qarsood.
Oo Ka mid ah in hada ka hor qoraaga caanka ah ee Salim Khan hanjabaad kala kulmay sido kalena bur burin doono mustaqbalkiisa Bollywood-ka Salim qof kale ma aha waa Super star Salman Khan Aabahiis.
Arintaan ayaa waxay ku dhacday 70-kii waxaa aad looga danbeeyay qoraayaasha Salim-Javed oo filimadooda guul weyn gaari jiray Haddaba waaa dhacday in Rishi Kapoor uu diido filimka ‘Trishul’ (1978) oo qoraa ka yihiin Salim-Javed sido kale Director Yash Chopra.
Waxaana ka dib lagu badalay doorkiisa Sachin sidaa daraadeed waxaa xanaaq ka qaaday in Rishi filimka Trishul uu diido Salim Khan.
Rishi Kapoor ayaa soo xasuustay taariikhdaas wuxuuna kusoo qoray buugiisa Salim–Javed waxay rabeen inaan la shaqeeyo filimkooda Trishul uu director ka ahaa Yash Chopra doorkeyga waxaa sameeyay Sachin, aniga waan ka diiday.
waxaana noqday aktarka ugu horeeyay taariikhda filim qoraa ay ka yihiin Salim–Javed markaas filimka Kabhi Kabhi waala daawaday ka dib Yash Chopra wacaan noqanay saaxiib dhow waxaana u sameeyay filimka ‘Doosra Aadmi’ oo Yash-ji qarash gareeyaha ka ahaa laakiin Trishul waanka diiday sababtoo ah kama helin doorkeyga filimka ka dib Salim iyo Javed wey ka xanaaqeyn diidmadeyda.
maalmo ka dib mar aan ku sugnaa Hotel Sea Rock in Mumbai waxaan ciyaaraayay game Salim ayaa goobta isku aragnay wuxuuna ihi dhahay sidee ku diidi kartaa Filimk iska leeyihiin Salim–Javed, Rishi wuu yaabay ka dib ayuu dhahay kama helin doorkeyga.
Ka dib Salim Khan ayaa Rishi ugu hanjabay inuu nur burin doono mustaqbalkiisa Bollywood-ka ma ogtahay inuu qofna diidiin filim aan anaga qoraa ka nahay ka dib Rishi ayaa ku dhahay Salim sidee ku bur burin kartaa?
Salim ayaa ugu jawaabay yaa kula shaqeynaayo adiga waa ogtahay in filimka Zanjeer aan u bandhignay Rajesh Khanna wuuna iska mashquuliyay ka dib filim kale lama sameyn Rajesh Amitabh Bachchan ayaana u dhiibnay filimka Zanjeer markaas ka dib Rajesh Khanna dib y dhac ayaa ku yimid Amitabh ayaa meesha kala wareegay sidaas ayaa ku bur burinay adigana sidaas ayaa kugu sameynaynaa.
Rishi ayaa dhahay ka dib waxaan bilaabay duubista filimka ‘Amar Akbar Anthony’, oo jibiyay qaar ka mid ah iskoorada Box Office-ka u yaalay sidaa daraadeed filimka kale ‘Immaan Dharam’ ee qoraa ka ahaayeen Salim–Javed director ka ahaa Desh Mukherjee, wuxuu noqday mid guul dareysta dadka waxay bilaabeen inay dhahaan waa bilaabtay guul darada Salim–Javed ( Salim–Javed ki film flop ho gayi)